Ao Trinite Sy Tobago, Tsy ‘Zavatra Kely’ Ny Firaisankinam-bahoaka Taorian’ny Tondradrano · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Novambra 2017 5:41 GMT
Iray amin'ireo tena nahery indrindra tamin'ny tantara ny vanim-potoanan'ny rivodoza Atlantika 2017 – ary nahitana rotsakorana be dia be, izay nitarika tondradrano nanerana ny faritr'ireo nosy roa na dia tsy tao anatin'ny faritry ny rivodoza aza i Trinite sy Tobago.
Tamin'ny fetin'ny Divali, 18 Oktobra 2017, nanakana ny Haindò maro tsy handrehitra ny deyas (jiro) teny ivelany ny orana tsy an-kijanona saingy tena mbola olana kokoa ny tondradrano tany amin'ny faritra maro tao amin'ny firenena , satria tsy nahomby tamin'ny fifehezana ny toe-draharaha ny manampahefana tompon'andraikitra.
Nitohy nandritra ny andro maro ny orana. I Trinite faritra afovoany sy atsimo no tena voa mafy indrindra, niaraka tamin'ireo toerana sasany izay voalaza fa tao anatin'ny rano efa ho iray metatra sy sasany. Nisy ihany koa ny fahavoazana tany amin'ny morontsiraka avaratry ny firenena, izay nahatonga ny olona tany an-toerana hitoka-monina.
Nanomboka nitantara ny zava-nitranga avy hatrany ireo mpiseran'ny media sosialy, namoaka ny lahatsary drone tao amin'ny YouTube sy Facebook . Ary nizara ny sarin'ny fahavoazana ny hafa tamin'ny alalan'ny vondrona Facebook maro.
Niezaka nankany amin'ny faritra iadidiany ihany anefa ireo Minisitra maromaro tao amin'ny governemanta; Tena nisongadina indrindra tao amin'ny media sosialy ny Dr. Lovell Francis, mpikambana iray ao amin'ny parlemanta ho an'i Moruga / Tableland, any amin'ny faritra farany atsimon'ny firenena. Nirodana ny arabe sasany tao amin'ny faritra nisy azy ; Nanamarika ity teny ity tao amin'ny lahatsorany izy raha namoaka sary tao amin'ny faritra iray “Tsy misy ambara.”
Nampiasa ny herin'ny media sosialy ihany koa ilay mpanolo-tsaina Candice Allain mba hamoahana lahatsary Facebook mivantana izay nanome fanavaozam-baovao ho an'ny olona mikasika ny fifamoivoizana amin'ny làlambe sy ny ezaka fanampiana tany avaratry ny firenena izay nahitana fihotsahan'ny tany maromaro. Navitrika tamin'ny fanampiana ireo mponina tany amin'ny faritra nisy tondradrano tamin'ny fanadiovana ny orinasam-paritra voakasika ny sampan'ny governemanta rehetra ao an-toerana, ary nitsidika ireo mponina niharam-boina ny praiminisitra .
Raha ny marina, nifamory ny ankamaroan'ny olona. Na izany aza, tsy nahay nihetsika ary nahatezitra ireo vahoaka ilay Kôlônely (misotro ronono) Dave Williams, Lehibe Lefitry ny Sampan-draharaha Amin'ny Fiomanana sy Fitantanana ny Voina (ODPM) , solontena tompon'andraikitra amin'ny fandrindrana ireo sampan-draharaha mpamonjy voina ilaina rehetra rehefa nanao tsinontsinona ny halehiben'ny zava-misy izy. Nisioka mivantana ny valan-dresaka an-gazety nataon'i Williams ny mpanao gazety iray:
Nisy ny fitarainana avy hatrany tao amin'ny tambajotra sosialy. Mba hiarovana ny ODPM anefa dia nilaza i Williams fa avy amin'ny tsy fahatomombanan'ny fifandraisana teo amin'ny sampan-draharaha mpamonjy voina no nahatonga ny fikambanana tara vao namaly ny antso sy noho ny tsy fahombiazan'ny fampiasaina ny fantsona fampitam-baovao mahazatra:
Niala tamin'ny toerany i Williams taorian'ny fimenomenoman'ny vahoaka. Na, araka ny nolazain'ilay mpanesoeso mahatsikaiky Mr.Live ao amin'ny Wired868 hoe, “nahatsiravina ny tondradrano tany afovoany sy atsimon'i Trinite raha mipetraka any ianao ka manana fangoraham-po . Na ‘zavatra madinidinika’ izany raha toa ianao ka ilay tale lefitry ny filankevi-pitantanana ao amin'ny Sampan-draharahan'ny Fiomanana sy Fitantanana ny Voina ary te hahalala hoe ahoana izany voadaka baoty avy ao aoriana izany.”
Nametraka fanontaniana ihany koa izy mikasika ny “fakon'ny fivarotana sy indostrialy” izay manentsina ireo renirano sasany any afovoan'i Trinite.
Tsy adino ny fanesoana ny toe-draharaha ho an'izay mahatsiaro ny adihevitra masiaka antserasera mikasika ny fandefasana fanampiana tany amin'ny faritra hafa taorian'ny rivodoza Irma sy Maria :